Anadrol ခံတွင်း Anabolic Steroids Oxymetholone CAS:434-07-1 ထုတ်လုပ်သူနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Taigui
Anabolic Steroids ထိုးဆေး
Nandrolone Steroid ဆေး
Semi Finished Steroids များ
လိင် Steroid ဟော်မုန်းများ
Anti Estrogen Steroids များ
SARMS ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း ဖြည့်စွက်စာ
ခံတွင်း Anabolic Steroids
Anadrol Oral Anabolic Steroids Oxymetholone CAS:434-07-1 ဖြင့် ပိန်ကြုံးသောကြွက်သားကိုယ်ထည်ကို ရယူပါ။
CAS မှတ်ပုံတင်နံပါတ်: 434-07-1
အသုံးပြုမှု- ဆေးဝါးပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်၊ Oxymetholone ကို ဓာတုကုထုံးဖြင့် သက်ရောက်သော aplastic anemia၊ myelofibrosis သို့မဟုတ် hypoplastic သွေးအားနည်းရောဂါ အပါအဝင် ခိုင်မာသောသွေးအားနည်းရောဂါ (သွေးနီဥများချို့တဲ့ခြင်း) ကိုကုသရန် အသုံးပြုပါသည်။
သိမ်းဆည်းနည်း- ဆေးကို အပူ၊ အစိုဓာတ်နှင့် အလင်းရောင်မှ 68°F မှ 77°F (20°C မှ 25°C) တွင် သိမ်းဆည်းပါ။မူးယစ်ဆေးဝါးအားလုံးကို ကလေးလက်လှမ်းမမီအောင်ထားပါ။သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် အသုံးမပြုသောဆေးများကို စွန့်ပစ်ပါ။အသုံးမပြုသောဆေးများကို ဆေးကြောခြင်း သို့မဟုတ် ဇလုံထဲသို့ လောင်းချခြင်း မပြုပါနှင့်။
20ml 50 mg/ml ဖြင့်
Oxymetholone အမှုန့် ၁ ဂရမ်
အရည်ပမာဏ ကိုင်ဆောင်ရန် သင့်လျော်သော ကရား ၁ ခု
PEG 300 ၏ 8.4 ml
10.5 ml 190 Proof Grain အရက် 50ml @ 50mg/ml
2.5 ဂရမ် Anadrol (2.5 ml)
Anadrol (သောက်သုံးသော) သံသရာ
အမျိုးသားများအတွက်သောက်သုံးသောပမာဏများသည် အများအားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် 50-100 မီလီဂရမ် (mgs) ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် များသောအားဖြင့် testosterone နှင့် deca durabolin ကဲ့သို့သော စိုစွတ်သောစတီးရွိုက်စတီးရွိုက်များဖြစ်သော အခြားသော စတီးရွိုက်အတုံးလိုက်အခဲများ နှင့် တွဲထားသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက်ဇာတ်လမ်းက နည်းနည်းကွာတယ်။Mr. Duchaine သည် အမျိုးသမီးများအတွက် တစ်နေ့လျှင် 10mgs ထိုးရန် အကြံပြုထားသော်လည်း ၎င်းကို အဓိကအားဖြင့် ၎င်း၏ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ကာယကြံ့ခိုင်သော မိန်းကလေးများအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
Anadrol အသုံးပြုသူအများစုသည် ၎င်းတို့၏ steroid ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် များပြားလှသောစက်ဝန်းများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း စုစုပေါင်းစက်ဝန်းကိုယ်တိုင်ထက် အချိန်တိုတိုအတွင်း သံသရာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်သာ တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။
အသည်းအဆိပ်သင့်မှုပြဿနာများကြောင့် Anadrol သံသရာသည်4မှ6ပတ်ထက်မပိုသင့်ပါ။သို့ရာတွင်၊ ထိုးဆေးများကဲ့သို့သော ၎င်းနှင့်အသုံးပြုသော အခြားဒြပ်ပေါင်းများကို Anadrol ၏အဆုံးသတ်ကာလထက်ကျော်လွန်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Anadrol ဆေးများ - အသုံးပြုမှုကြာချိန်
အမျိုးသားအများစုအတွက် တစ်နေ့လျှင် 50mg ရှိသော Anadrol ပမာဏသည် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင် 25mg ရှိသော Anadrol ပမာဏသည် ဖြတ်တောက်ခြင်း သံသရာအတွက် အလွန်အကျိုးရှိနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသော ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်မှုပြိုင်ပွဲ လည်ပတ်မှု .လျှော့နည်းသော Anadrol ဆေးများသည် ထိုပြဿနာများကို ထိန်းချုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အချို့အမျိုးသားများသည် တစ်နေ့လျှင် 75-100mg ၏ Anadrol ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ တစ်နေ့လျှင် 100mg အထက်ဆေးများသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို အာမခံပါသည်။အများစုသည် ၎င်းတို့၏ အစာစားချင်စိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချရန် တစ်နေ့လျှင် Anadrol ပမာဏ 100mg အထက်ကို မကြာခဏ အစီရင်ခံကြပြီး၊ ကြီးထွားမှု အလွန်ခက်ခဲစေပါသည်။ ၎င်းသည် အမျိုးသားအများစုအတွက် 4-6 ပတ်ကြာအချိန်ဘောင်ဖြစ်လာသည်။ထိုသို့သောအသုံးပြုမှုအချိန်ဘောင်သည် ဘေးအကင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ဤစတီရွိုက်၏အလိုရှိသောရလဒ်များအားလုံးကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အစပြုသူ Anadrol သံသရာ စတင်သူ Anadrol စက်ဝန်းနမူနာ (စုစုပေါင်း လည်ပတ်ချိန် 12 ပတ်)
- Testosterone Enanthate 300 - 500mg/ပတ်
- Anadrol 25 - 50mg/day တွင်
အလယ်အလတ် Anadrol သံသရာ အလယ်အလတ် Anadrol စက်ဝန်းနမူနာ (စုစုပေါင်း စက်ဝိုင်းအချိန် 12 ပတ်)
- Testosterone Enanthate 100mg/ပတ်
- Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin) 400mg/ပတ်
- Anadrol 50mg/day
အဆင့်မြင့် Anadrol သံသရာ အလယ်အလတ် Anadrol စက်ဝန်းနမူနာ (စုစုပေါင်း စက်ဝိုင်းအချိန် ၈ ပတ်)
- Testosterone Propionate 25mg တစ်နေ့ခြား (100mg/week)၊
- Trenbolone Acetate 100mg တစ်နေ့ခြား (400mg/week)၊
- Anadrol 100mg/day
Anadrol နှင့် Dianabol
Dbol နှင့် Anadrol 50 အကြား နှိုင်းယှဉ်ချက်သည် လုံလောက်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။Anadrol သည် Dihydrotestosterone နှင့် Testosterone မှ Dbol မှဆင်းသက်လာသော်လည်း Anadrol သည် ဤ steroids နှစ်ခုကြားတွင် ဆင်တူမှုများ အများအပြားရှိသည်။
Anadrol သည် power lifting တွင်ပါဝင်နေချိန် သို့မဟုတ် အလွန်ပြင်းထန်သော၊ အလွန်မြန်သောသင်လိုချင်သောစတီရွိုက်ဆေးဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် ဖောင်းပွမှုနည်းသော အမြတ်ငွေများကို ရှာဖွေနေပါက၊ dianabol နှင့် သွားပါ။
ထုထည်တက်လာပြီး လျင်မြန်သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိလာသောအခါတွင် anadrol သည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ဟု သံသယမရှိပါ။မည်သူ့ကိုမဆို ကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေနိုင်သည်။
ယခင်- rFat လောင်ကျွမ်းမှုအတွက် ခံတွင်း anabolic စတီးရွိုက်အမှုန့် Oxandrolone(Anavar)
နောက်တစ်ခု: CAS 10418-03-8 ပါးစပ် anabolic steroids Stanozolol Winstrol ဖြတ်တောက်ခြင်းသံသရာ
ခံတွင်း Steroids ဖြတ်တောက်ခြင်း။
Bulking အတွက် Oral Steroid Cycle
ပါးစပ်ဖြတ်ခြင်းအတွက် Steroid သံသရာ
Bulking အတွက် Oral Steroids
ခံတွင်း Testosterone Steroid
Bulking အတွက် အလုံခြုံဆုံး Oral Steroid
Testosterone Enanthate ခံတွင်း၊
Testosterone Propionate ခံတွင်း၊
Testosterone Undecanoate ခံတွင်း
ခံတွင်း anabolic steroid အမှုန့် Oxandrolone (Anavar...
Lean Muscle Oral anabolic steroids Powder ကိုတည်ဆောက်ပေးခြင်း...
ကင်ဆာကုသခြင်း Oral anabolic steroids Fluoxym...
CAS 10418-03-8 ခံတွင်း anabolic steroids Stanozolo...
Anabolic Steroid Hormone ကုန်ကြမ်း Steroid Powders Professional ပေးသွင်း